सिंगापुर जानुअघि बैठकमा ओली र नेपालको जुहारी, हेर्नुहोस के-के भनाभन भयो !
सिंगापुर जानुअघि बैठकमा ओली र नेपालको जुहारी, हेर्नुहोस के-के भनाभन भयो !
'४६ वर्षदेखि विवाद व्यहोर्दै छु'
० प्रधानमन्त्रीले आफू नहुँदा पार्टी निर्णय सहमतिका आधारमा गर्नुहोस् भन्दा किन भनाभन गरेको ?
सहमतिबाटै जानुपर्छ । पार्टीलाई छलफलबाट मिलाएरै अगाडि लैजानुपर्छ । पार्टीमा छलफल, बहस त भई नै रहन्छन नि ! आजमात्र होइन, मेरो अनुभव भन्नुहुन्छ भने २०३१ सालदेखि विवाद हुँदैहुँदै आएको छ । त्यस्ता विवाद तपाईंहरुका निम्त्ति नयाँ लाग्न सक्छ । मैले त ४६ वर्षदेखि नै व्यहोर्दै आएको छु । (सचिवालय बैठकपछि रामकृष्ण अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी )